Top 10 Audio teepu maka Mac OS X ei Capitan (10.11)
Mac OS X ei Capitan (10.11) bụ ọhụrụ sistemụ si Macintosh kọmputa na-atụ anya na-adị ukwuu nke na-nweta nkwalite si ya antecedent os X Yosemite. Nke a sistemụ ga-ekwe ka ọhụrụ na mma Ịrụ ngwa na-arụ ọrụ na ya.
Ruo n'ókè ụfọdụ ụfọdụ n'ime Yosemite mmemme ga-aghọ gharazie ịba uru, esighịkwa eziokwu na Mac OS X ei Capitan (10.11) nwere ike ijikwa ọbụna mma Ịrụ omume. Audio ndekọ ihe atụ, a ga-kwalite iji nweta ihe kasị mma si Mac OS X ei Capitan (10.11) sistemụ.
Ebe a na-10 nke kasị mma audio ndekọ maka Mac OS X ei Capitan (10.11).
1. aha: Wondershare AllMyMusic
Nkowasi: Nke a bụ ihe ọzọ bara uru ọdịyo ndekọ ngwá ọrụ e mere nke kacha arụmọrụ na elu àgwà mmepụta. Nke a bụ n'etiti ole na ole online gụgharia ndekọ na gbanyụọ mgbasa ozi maka ahịa n'ihi na ọcha ndekọ mmepụta ebi.
Records ma ọdịyo na videos
Disables mgbasa ozi maka ahịa
-Enye ohere maka ndụ iyi ndekọ
Ọ dịghị onye dị
2. aha: iSkySoft Audio teepu
Nkowasi: Nke a bụ otu audio edekọ ahụ ga-agbanwe ị Ndekọ ahụmahụ online. Ọ na-ike ka ọtụtụ narị online redio ụgbọ na nwere apa ọkụ audio atụmatụ na enye gị ohere download music si saịtị dị ka YouTube na ọkụ ha n'ime gị disks
Na-akwado nnọọ ọtụtụ online redio ụgbọ, ihe karịrị 300 ụgbọ
Nwere a apa ọkụ nhọrọ maka ihe ndị ebudatara music
Na-enye gị ihe ọmụma banyere a song dị ka ọ na-ekere na-akpaghị aka
Enye gị ohere iji tọghata music ka na-achọsi ike formats
3. aha: Aimersoft teepu
Nkowasi: Nke a ọdịyo edekọ na dị nnọọ mfe iji na gị Mac. Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ online edekọ ọ nwere ike dee elu àgwà audios si online redio ụgbọ na gụgharia media saịtị dị ka YouTube.
Records elu àgwà audio
Nwere a dịgasị iche iche nke ọdịyo ndekọ formats
Enye gị ohere iji ọkụ dere audios ka diski kpọmkwem site ngwa
Emewo ka ike zụrụ
4. aha: Audio ikwusi n'ike Pro
Nkowasi: Dị nnọọ dị ka aha ya na-egosi, a na usoro-enye gị ohere 'ikwusi n'ike' gị audios ndụ si a gụgharia website na oge. Audio ikwusi n'ike-enye gị ohere dee gị audio na a dịgasị iche iche nke formats.
Enye gị ohere ka ịdekọ audio ndụ iyi si fọrọ nke nta ọ bụla website
Nwere a dịgasị iche iche nke mmetụta
Ọ bụ nnọọ mgbagwoju anya, karịsịa mgbe na-agbakwụnye mmetụta
5. aha: APowersoft Audio teepu
Nkowasi: Nke a bụ nnọọ mfe audio edekọ usoro ihe omume Mac, mfe n'echiche nke na niile aga-eme na-enịm na nnọọ akpa peeji nke interface. Nke a na usoro nwere ike ịtọọ oge ndekọ aga-eme, a atụmatụ na dị ezigbo mkpa n'ihi ndị na-adịghị chọrọ na-eji ọtụtụ n'ime ha oge na-eche na ndekọ usoro ga-fọrọ.
Nwere ike ịchọpụta audio ọmụma-akpaghị aka, n'ihi na ihe atụ album na omenkà aha
Records zuru okè na mac na efu ọnwụ.
Naanị ikpe na nsụgharị ndị na ọtụtụ download saịtị
6. Aha: Sound Kpatụ
Nkowasi: Nke a bụ isi audio edekọ na ndị niile functionalities nke a bụ isi na-edekọ dị ka Wave na mpe mpe akwa ụda edezi, na-ere ọkụ ike na Common audio formats akwado ka MP3 na WAV.
Na-efegharị efegharị na mpe mpe akwa ụda nchịkọta akụkọ, ị nwere ike idezi gị audios dị ka ị na-amasị
Ike idekọ ma offline na online
Nwere a gụgharia edekọ na-enye gị ka ịdekọ audios dị ka ha na-enuga ndụ
Na-achọ Ugboro mmelite ma ọ bụrụ na ị na-aga mkpa elu atụmatụ, cheta na ọ bụ nanị ndị bụ isi na-edekọ, otú i nwere ike ịnọgide na-achọpụta na ihe bụ ihe ọhụrụ site Mmepụta
7. aha: Orb Caster
Nkowasi: Nke a bụ otu audio edekọ nke ga-ose elu gị ndekọ ahụmahụ na Mac. Orb caster-enye gị ohere Record ma audios na vidiyo na-enuba na gị Mac ngwaọrụ.
Na-ike na-ewu ewu online ọrụ telivishọn dị ka ESPN TV
Live ọdịyo na video ndekọ mgbe nkwanye
Na-akwado a dịgasị iche iche nke ọdịyo na video ndekọ formats
Na-achọ otu ebe njikọ Ịntanetị maka doro anya audio-visual ndekọ ndapụta.
8. aha: Macvide
Nkowasi: Nke a bụ ma ihe online na offline audio edekọ maka Mac. Nke a na usoro-enye gị ohere ka ịdekọ audios si mpụta plugged na microphones nakwa si ​​ọkacha mmasị gị website dị ka YouTube.
Nnọọ ọrụ enyi na enyi, site kensinammuo interface
Records audio multiple isi mmalite
Kachasị maka Mac
Enwereghị a isi nchịkọta akụkọ nke audios
9. aha: Eye Jikọọ
Nkowasi: Nke a abụghị nanị ihe audio edekọ, ọ bụkwa usoro ihe omume nke na-enye ohere maka video gụgharia na dijitalụ data òkè.
Dị mfe iji na wụnye
Na-akwado ma ọdịyo na video ndekọ
Na-akwado a dịgasị iche iche nke ọdịyo na video formats
Nnọọ ole na ole plugins ka mma arụmọrụ
10. Aha: Onde Audio teepu
Nkowasi: Nke a bụ otu edekọ omume na bụ nnọọ irè, esighịkwa eziokwu na ọ na-enye ma online na offline ndekọ nhọrọ. Ọ dere ụda na-atọghata ya na-achọsi ike formats
Ike idekọ si ndị ọzọ ngwa ihe atụ ekwentị oku site na Skype na Ichat
Ogbe ndekọ ike
Ike ga-eji ibudata audios online
Ka dị nnọọ ọhụrụ na ahịa, nke pụtara na kasị cons adịghị a chọpụtara
> Resource> Naghachi> Top 10 Audio teepu maka Mac OS X ei Capitan